Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » A na-echeta yabasị raw raw ugbu a n'ihi Salmonella
A na-echeta eyịm raw ntụ (ọbara ọbara, odo na ọcha) nke Prosource Produce LLC nke Hailey, Idaho, nke steeti Chihuahua, Mexico na-ebupụ n'ahịa n'ihi mmetọ Salmonella nwere ike ime.
Ndị na-eri nri ekwesịghị iri ngwaahịa ndị echetere akọwara n'okpuru ma ọ bụ nri nwere yabasị ọhụrụ a. Ndị na-ere ahịa, ndị nkesa, ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ nri dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, cafeterias, ụlọ ọgwụ, na ebe a na-elekọta ndị agadi ekwesịghị ije ozi, jiri, ma ọ bụ ree ngwaahịa echetara akọwara n'okpuru.
E rerela ngwaahịa ndị a na Ontario na Quebec ma nwee ike kesaa ya na mpaghara na mpaghara ndị ọzọ.
Ngwaahịa ndị a nwekwara ike ree na nnukwu ma ọ bụ na obere ngwugwu nwere ma ọ bụ na -enweghị akara, ọ nwere ike ọ gaghị ebu otu akara ma ọ bụ aha ngwaahịa dị ka akọwara n'okpuru. CFIA ga-aga n'ihu nyocha ya na ndị mbubata ndị ọzọ enwere ike, ncheta ndị ọzọ nwere ike iso.
Brand Product size UPC Koodu na ozi ndị ọzọ
Nnukwu oke oke ehi kacha ọhụrụ na-emepụta Sierra Madre Mepụta Markon mbụ ihe ubi Markon dị mkpa RioBlue ProSource Rio Valley Imperial Fresh Eyịm uhie uhie yabasị ọcha Akpa ntupu: 50 lb 25 lb 10 lb 5 lb 3 lb 2 lb katọn: 50 lb 40 lb 25 lb 10 lb 5 lb agbanwe Ngwaahịa niile
31, 2021. Mmepụta nke steeti
Ọ bụrụ na ị chere na ị dara ọrịa site na iri ngwaahịa echetara, kpọọ dọkịta gị.
Lelee ma ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa echetara na ụlọ gị ma ọ bụ ntọala gị. Ngwaahịa echetara kwesịrị ịtụfu ma ọ bụ weghachi ya na ebe azụrụ ya. Ọ bụrụ na ị maghị njirimara nke eyịm dị n'aka gị, lelee ebe ịzụrụ ihe.
Nri emetọọ na Salmonella nwere ike ọ gaghị ele anya ma ọ bụ na-esi isi emebi emebi mana ọ ka nwere ike ime gị ọrịa. Ụmụaka na-eto eto, ndị inyom dị ime, ndị agadi na ndị nwere usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike nwere ike ibute ọrịa siri ike na mgbe ụfọdụ na-egbu egbu. Ndị nwere ahụike nwere ike ịnweta mgbaàmà dị mkpirikpi dị ka ahụ ọkụ, isi ọwụwa, vomiting, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa na afọ ọsịsa. Nsogbu na-adịte aka nwere ike ịgụnye ogbu na nkwonkwo siri ike.
• Mụtakwuo maka ihe egwu ahụike
Ihe kpatara ncheta a bụ n'ihi icheta na obodo ọzọ. Ụlọ ọrụ nyocha nke nri Canada (CFIA) na-eme nyocha nchekwa nri, nke nwere ike iduga na icheta ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echetara ngwaahịa ndị ọzọ nwere nnukwu ihe egwu, CFIA ga-eme ka ọha na eze mara site na ịdọ aka ná ntị ncheta nri emelitere.
Enwebeghị ọrịa a kọrọ na Canada metụtara oriri ngwaahịa ndị a.